Shirkadda Adidas oo si aan ku talagal ahayn u shaacisay lambarka uu Philippe Coutinho u xiran doono kooxdiisa cusub ee Bayern Munich – Gool FM
Haaruun August 18, 2019
(Munich) 18 Agoosto 2019. Shirkada Adidas ee bahwadaaga la’ah Naadiga Bayern Munich, isla markaana far sameysa maaliyadda kooxda reer Jarmal ayaa si aan ku talagal ahayn ugu shaacisay barteeda Instagram-ka lambarka uu Philippe Coutinho u xiran doono kooxda cusub ee xafidanaysa horyaalka Bundesliga.
Laacibka khadka dhexe ee kooxda Barcelona, Philippe Coutinho ayaa maanta oo Axad ah gaaray dalka Jarmalka ka hor inta uusan tijaabada caafimaad u marin naadiga Bayern Munich.
Laacibkan reer Brazil ayaa hal sano iyo bar ku qaatay garoonka Camp Nou, Barcelona ayaana ciyaaryahankan Coutinho u ogolaatay inuu hal xilli ciyaareed oo amaah ah ku qaato kooxda Bayern Munich.
Si kasbata ha ahaatee, 27-sano jirkaan lagu sawiray isagoo sii galaya xarunta tababarka ee kooxda Bayern Munich, waxaa la filayaa in dhawaan la xaqiijiyo saxiixiisa kaddib marka uu ka gudbo tijaamada caafimaad.
Shirkadda Adidas ayaa si kama ah u shaacisay in Coutinho uu kooxdiisa cusub ee Bayern Munich u xiran doono lambarka 10-aad oo uu kooxda u qaadan jiray Arjen Robben.
Lambarkan 10-aad waxaa sidoo kale horay kooxda Bayern Munich ugu soo xirtay xiddigaha halyeeyada ah ee Roy Makaay iyo Lauthar Mathuas.
Xiddiga xulka qaranka Brazil ee Coutinho ayaa lambarka 10-aad u xirnaan jiray kooxdiisa hore ee Liverpool oo ka dhisan dalka Ingiriiska, markii uu ku biiray kooxda reer Spain ee Barcelona waxa uu xirtay lambarka 14-aad ka hor inta uusan u bedelan lambarka 7-aad oo haatan Barca u qaadanayey.